'टानका लागि म क्यापेवल छु, अरु साथीहरुले भन्दा मैले कार्यकुशलता प्रदान गर्न सक्छु' : पूर्वमहासचिव मोहन लम्साल - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
‘टानका लागि म क्यापेवल छु, अरु साथीहरुले भन्दा मैले कार्यकुशलता प्रदान गर्न सक्छु’ : पूर्वमहासचिव मोहन लम्साल
Posted by Headline Nepal | २९ आश्विन २०७४, आईतवार १०:१८ |
नेपालका पर्वतीय र पदयात्रा पर्यटन व्यवसायीको छाता संगठन ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)को महाधिवेशन नजिकिंदै छ । टानको पूर्व महासचिव मोहन लम्सालले टानमा आफ्नो उमेद्वारी घोषणा गर्ने तयारी गरेका छन् । टानको नेतृत्वमा उमेद्वारी दिन पूर्वमहासचिव लम्सालले आफ्ना केके योजना अघि सारेका छन्, अव टानमा कस्तो नेतृत्व आउनु आवस्यक छ, तथा टानका लागि आफ्नो भावि रणनीति के छ जस्ता विषयमा उनै लम्सालसँग हेडलाईन नेपालले कुराकानी गरेको छ । हेरौ टानका पूर्वमहासचिव मोहन लम्सालसँगको कुराकानी :
टानको अधिवेषन नजिकिँदै छ, तयारी कस्तो भईरहेको छ तपाईंको ?
– टानको अधिवेशन नजिकिसकेको छ । मैले यसको तयारी गरिरहेको छु । मलाई माया गर्ने, मेरा शुभचिन्तकहरु, साना ठुला व्यवसायीहरुसँग भेटेर, फोनबाट तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर कुरा गरिरहेको छु । उहाँहरु एकदमै सकारात्मक हुनुहुन्छ । उहाँहरुले भन्नुहुन्छ, तपाईंजस्तो पुरानो, अनुभवि व्यावसायी, महासचिव हुँदा तथा कोषाध्यक्ष हुँदा गरेका महत्वपूर्ण कामहरु सबैलाई थाहा छ । तपाईं जस्तो अनुभवी मानिस आउनुपर्छ । हामी यो पार्टी उ पार्टी भन्दा पनि तपाईंलाई नै हामी सहयोग गछौं भनेका छन् । मलाई विश्वास छ, उहाँहरुले मैले गरेका कामलाई हेरेर मलाई पूर्ण रुपमा सहयोग गर्नुहुन्छ ।
तपाईंले आफु उमेद्वार गर्ने सोच किन ल्याउनु भयो ? नेतृत्वमा तपाईं नै किन चाहियो, अरु आउँदा हुन्न ? ?
– म नै किन चाहियो भन्ने प्रश्नमा, नं १. ,मेरो लामो अनुभव छ, जुन क्षेत्रको व्यवसायी अनुभवी हुन्छ, त्यस व्यवसायीले सबै व्यवसायको समस्या बुझेको हुन्छ । त्यो समस्यालाई हामीले सरकारसँग डिल गर्न सक्छौं । नं. २. ,म विगतका कार्यसमितिमा दिपक महतको पालामा सदस्यमा, नरेन्द्र विसीको पालामा कोषध्यक्षमा, महेन्द्र सिंह थापा अध्यक्षमा हुँदा महासचिवमा थिए । टानलाई कुशलतापूर्वक सञ्चालन गर्न योगदान गरिसकेको र टानलाई नजिकसँग बुझेकोले म नेतृत्वमा जानुपर्छ भन्ने लाग्छ । नं ३., सरकारसँग विगतका कार्यसँग बस्दा लविङ गर्ने, सरकारी कर्मचारीहरु लगायत व्युरोक्यासीलाई कन्भिन्स गर्ने पावर मैले त्यहाँ देखाईसकेको छु । त्यसकारण नेतृत्वमा म जानुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
टानमा काम गर्ने भन्दा पनि गुटको राजनीति बढि भईरहेको छ। यो विकृतिलाई हजुरले कसरी हटाउनुहुन्छ ?
– यो विकृतिलाई जसरी पनि हटाउनुपर्छ । यसलाई म एक्लैले हटाउने भन्ने कुरा पनि हुँदैन । हाम्रो यो विजिनेस संगठनमा अलि बढि राजनीति खिचातानी भएको छ । र भैझगडा भयो । त्यो यिवषयमा पनि म महासचिव हुँदा आफ्नो कुशलता देखाईसकेको छु । त्यतिबेला पनि हामी तिनचार ओटा पार्टी नजिकका साथीहरु गएका थियौं । पटकपटक विवाद हुँदा विवाद महासचिवकै थाप्लोमा आउँथ्यो र मैले सबै मिलाएर देखाको थिएँ । त्यतिबेला पनि हामीले प्रशस्तै काम गरेका छौं । टानकै ईतिहासमा १० ओटा ट्रेकिङ रुट बनायौ। जुन मेरै आईडियामा थियो । त्यसकारण म क्यापेवल छु । मलाई आत्मविश्वास छ । अरु साथीभन्दा मैले कार्यकुशलता प्रदान गर्न सक्छु ।
यदि तपाईंले नेतृत्वको जिम्मा पाएको खण्डमा टानको पोलिसीहरु कसरी अगाडी लैजानुहुन्छ ?
-टानको पोलिसिमा अहिले धेरै सुधार गर्नुपर्छ । व्यवसायमा झन्झटहरु बढ्दैगएको छ, यसलाई हामीले हटाउनुपर्छ । कानुनहरु संशोधन गर्नुपर्छ । लबिङ गर्नुपर्छ ।
अहिले जुन अवस्थामा टान अघि बढिरहेको छ, यहि अवस्थामा यसको भविस्य कस्तो देखिन्छ ?
– कार्यसमितिमा रहेको साथीहरुको चित्त दुख्ला । हामीले आलोचना गरेको जस्तो हुन्छ , मैले आलोचना गरेको होईन । अहिले सुन्नमा आएको टानको आर्थिक अवस्था साह्रै अप्ठ्यारो स्थीतिमा छ, हिजो हामीले छाडेको समयमा भन्दा । यो धरासायी अवस्थालाई हामीले मेहनत गरेर उठाउने हो । आर्थिक अवस्था धरासायी भए पनि हामीले नयाँ आईडियाहरु ल्याएर आर्थिक संकलन गरिन्छ । अहिले टानसँग सहकार्य गर्न थुप्रै आईएनजिओहरु लालायीत छन् । यीनीहरुसँग पनि सहकार्य गरेर टानको अवस्था माथि उठाउन सक्छौं ।
पछिल्लो समयमा अहिलेको कार्यसमितिको कार्य ‘स्लो’ भएको हो, तपाईँहरुको कार्यकालमा भन्दा ?
– यो अब मैले भन्नुभन्दा पनि तपाईं पत्रकार मित्रहरुले औल्याईदिनुपर्ने कुरा हो । कसको कार्यकालमा केकति काम भए त्यो औल्याउने बाहिर बस्नेहरुले हो । तर आम पत्रकारहरुले मलाई भन्नुहुन्छ, तपाईंहरुको कार्यकालमा जसरी आजकल काम भएको छैन । यो मलाई फुर्काउन भन्नुभयो या साँच्चै भन्नुभयो उहाँहरुकै कुरा हो ।
अन्त्यमा, तिहार पनि आईसक्यो, तपाईंको टानको अधिवेशन पनि आईसक्यो , के भन्न चाहनुहुन्छ ?
– सर्वप्रथम देशबाशी, आमाबुबा, दाजुभाई, दिदिबहिनी तथा पर्यटन व्यवसायीहरुलाई तिहारको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । पर्यटन यस्तो क्षेत्र हो, विना ठुलो लगानीमा नेपालमन दुरदराजमा पर्यटक पुर्याउन सक्यौं भने निकै फाईदा हुन्छ । यसले रोजगारी समेत प्रदान गर्दछ । त्यसकारण पर्यटनलाई सम्पुर्ण देशबासीले पर्यटनलाई माया दिनुहोला भन्न चाहन्छु ।
Previousयी हुन् अनुष्काको ‘ह्याण्डसम हिरो’
Nextउपकरण प्रयोग गरेर फिल्मी शैलीमा चिट चोरी !
‘अत्यावश्यक क्षेत्रमा बन्द, हडताल गर्ने व्यवसायीलाई जेल हाल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ’ : आपूर्ति सचिव
११ फाल्गुन २०७३, बुधबार १४:४४
‘श्रीमानको परस्त्रीसँगको अफेयरले मलाई खुसी बनायो’
७ कार्तिक २०७४, मंगलवार ११:३०
बंगलादेशसँगको तेस्रो एकदिवसीय क्रिकेटमा न्युजिल्याण्ड ८ विकेटले विजयी
१६ पुष २०७३, शनिबार १४:०६
‘कांग्रेसले जितेपनि एमालेले जितेपनि देशले जित्छ’ : प्रधानमन्त्री
५ जेष्ठ २०७४, शुक्रबार १५:५२